KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ ငြိမ်းချမ်းရေး အကြိုဆွေးနွေးရေး သတင်း နှင့် DKBA မှ တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ကျင်းပခြင်း သတင်း
KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ ငြိမ်းချမ်းရေး အကြိုဆွေးနွေးရေး သတင်း နှင့် DKBA မှ တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ကျင်းပခြင်း သတင်း
POSTED BY မင်းစိုးစံ(အဝေးရောက် ကရင်ဒုက္ခသည်တဦး) AT 2:48 PM
KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးစေးဖိုးအား ဇွန် ၁၅ရက် ဆွေးနွေးပွဲအပြီး MPC ၌ တွေ့ရစဉ်
KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ ငြိမ်းချမ်းရေး အကြိုဆွေးနွေးရေး သတင်း
DKBA မှ တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ကျင်းပခြင်း သတင်း
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:58 PM
နတ်မောက်မြို့ နယ် ထုံးပေါက်ချိူင်းကျေးရွာ၌ အရပ်ရှစ...
စင်ကာပူ လေထုညစ်ညမ်းမှု အဆိုးဆုံး အခြေအနေရောက်
KIO ခေါင်းဆောင်တွေကို ကချင်လူထုမှ သောင်းသောင်းဇြဇြ...
9th. Karen National Unity. Seminar
အစိုးရတပ်မှ တောင်ငူ ဘက်တွင် ဗုံးကြဲလေ့ကျင့်နေ။
DKBA ၏ ကော်သူမွဲခီး (ဆုံဆည်းမြိုင်) ထုတ်ပြန်ကြေညာခ...
KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ ငြိမ်းချမ်းရေး အကြိုဆွေး...
ငြိမ်းချမ်းရေး အကြိုဆွေးနွေး ရန် KNU ကိုယ်စားလှယ် ...